NY FINOANA… – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 août 1, 2014 juillet 31, 2014 Laisser un commentaire sur NY FINOANA…
« Ary tsy niahanahana ny amin’ny teny fikasan’Andriamanitra tamin’ny tsy finoana izy,fa nampaherezin’ny finoana ka nanome voninahitra an’Andriamanitra. » Romana 4:20
– Ny finoana resahina eto dia ny finoana an’Andriamanitra, ary anisany ahitana izany ny ao amin’ny Hebreo 11:1, « ary ny finoana no fahatokiana ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. » Nanantena an’Andriamanitra sy ny teny fikasana nomeny i Abrahama, ka nampaherezin’izany finoana izany izy. Dia, ny zavatra nataony rehetra dia nifanaraka tamin’izany finoana izany, tsy nanohitra ny sitrapon’Andriamanitra izy, ary dia nanome voninahitra Azy izy tamin’izany. Ny fahafantarantsika ny fikasan’Andriamanitra ny amin’ny fiainantsika ka mahatoky Azy isika dia mampahery antsika ny finoana izany. Toa misy vokany eo amin’ny fiainantsika ny fibanjinana izany ary mahatonga antsika hanana hery ary indrindra faharetana amin’ny zavatra ataontsika satria fantantsika fa miandany amintsika Andriamanitra.
– Sitraka: fa raha tsy amin’ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy; fa izay manatona an’Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy sady Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy. Mahafaly an’Andriamanitra ny finoantsika Azy!
– Ny fiahanahana dia mampiseho ny tsy finoana ny tenin’Andriamanitra. Ary manala-baraka Azy isika amin’izany. Avy amin’i Satana ny tsy firaikàna amin’ny fahatokiana an’Andriamanitra. Raha miahanahana amin’ny zavatra atao dia tsy hahazo na inona na inona: fa aoka tsy hanampo handray zavatra amin’ny Tompo izany olona izany!
– Nanome voninahitra an’andriamanitra i Abela tamin’ny nanaterany fanatitra tsara ho an’Andriamanitra. Tahaka izany koa i Abrahama izay nanaiky ny antson’Andriamanitra hiainga hankany amin’ny tany azony ho lova na dia mbola tsy fantany aza izay alehany. Isika koa dia efa nantsoin’Andriamanitra handray ny lova masina dia ny Fiainana mandrakizay amin’ny fanomezana toerana tsara ao amin’ny fiainantsika an’ny Tompo Jesosy Kristy isanandro, ary aoka tsy atopatopan’ny rivotra atsy sy eroa fa hanome voninahitra an’Andriamanitra amin’ny finoana Azy!
Publié parfilazantsaramada août 1, 2014 juillet 31, 2014 Publié dansUncategorized